Wararka - Bandhigga YUYAO 2018-2019
CHINA (YUYAO) Expo Balaastikada Caalamiga ah 2018 & 20-kath Shiinaha Caaga Expo iyo Shiinaha (YUYAO) International Caaga Expo 2019 & The 21th China caaga Expo waxaa lagu qabtay Ningbo Yuyao China Plastics City International Exhibition Center.
Bandhigga ayaa soo jiitay in ka badan 29,000 oo ganacsato wax ku ool ah waxaana lagu guuleystay guud ahaan isugeyn dhan 3.9 bilyan yuan.
Bandhigu wuxuu leeyahay aag guud ahaan lagu soo bandhigayo oo qiyaastii gaaraya 70,000 mitir murabac ah, 3,400 waab iyo shan goobood oo carwo lagu soo bandhigayo, oo ay ku jiraan alaabada ceeriin ee caaga ah, mashiinada caaga ah, qalabka mashiinka caaryada, alaabada balaastigga ah (qalabka guryaha yar yar) iyo aalado caqli badan. Wadar ahaan 707 ganacsi oo ka kala yimid gudaha iyo dibaddaba ayaa kaqeyb galay bandhiggan
Bandhigu wuxuu socday seddex maalmood wuxuuna furay afar hoolal oo carwada lagu soo bandhigo (4 # - 6 # - 8 # - Hall wadaag) ee Xarunta Caalamiga ah ee Shirarka iyo Carwooyinka ee Shiinaha Plastics. Bandhigu wuxuu ku saabsanaa qalabka mashiinka jarista birta, qalabka mashiinka sameynta birta, xaashida birta iyo qalabka wax lagu farsameeyo ee tuubada, qalabka korontada iyo qalabka mashiinka wax lagu farsameeyo ee qaaska ah, wax soo saarka caaryada iyo farsamaynta, qalabka caaryada iyo farsamada 3D ee lagu daro, qalabka otomatiga iyo tikniyoolajiyadda, warshadaha iyo ganacsiga. qalabka Qalabka caqliga iyo teknolojiyadda sida cabbiraadda iyo goynta qalabka, qalabka mashiinka qaybo shaqeynaya, iwm
Bandhigu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu keeno tiknoolajiyada ugu dambeysa iyo qalabka wax soo saarka warshadaha ee aagga Yuyao, ka caawiyo ganacsiyada hal-abuurka warshadaha iyo casriyeynta tiknoolajiyada wax soo saarka, si loo wanaajiyo tartanka suuqa iyo caannimada shirkadaha.
Sannad kasta, shirkaddayadu waxay qaadan doontaa hal layn oo balaastiig ah oo balaastig ah si ay uga qayb gasho imtixaanka waxayna ku soo saartaa tuubooyin caag ah goobta. Ka sokow, bandhigyada kala duwan ee mashiinka aan qaadanno sidoo kale wuu ka duwan yahay, kaasoo soo jiita tiro badan oo macaamiil ah si ay u daawadaan oo ay u rabaan inay ogaadaan faahfaahinta goobta. Waxa kale oo jira macaamiil yar oo oggolaaday inay booqdaan warshadda oo ay amarada ku bixiyaan goobta. Mar kasta oo aan la yaabno, faraxno, oo mahadnaqno.